ज्यान मुद्दामा मेयर–उपमेयर - प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
ज्यान मुद्दामा मेयर–उपमेयर
भाद्र ३१, २०७६ श्यामसुन्दर शशि
जनकपुर — ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी परेयता हँसपुर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा तीन वडाध्यक्ष तथा एक मनोनित सदस्यसहित ६ कार्यपालिका सदस्य सम्पर्कविहीन भएका छन् । नगरका बहुसंख्यक पदाधिकारी अनुपस्थित रहेका कारण नगरपालिकाको कामकाज ठप्प प्रायः भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भएका विकास निर्माणका अधिकांश योजनाको भुक्तानी अझै पनि हुन सकेको छैन । मेयर–उपमेयर बीचको विवादको कारण भुक्तानीबाट वञ्चित रहेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अचेल नगरपालिकाको चक्कर काट्न बाध्य छन् ।
यसका अतिरिक्त वडासमितिबाट प्रदान गरिँदै आएको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, कृषि मोटर, स्वास्थ्य लगायतका सिफारिस हुन सकिरहेका छैन । खडेरी परेको कारण किसान सहुलियत दरको कृषि मोटर खरिद गर्न चाहन्छन् तर यसका लागि वार्डको सिफारिस चाहिन्छ । यसैगरी असाध्य रोगका बिरामी पनि सिफारिसबाट वञ्चित भएका छन् ।
मण्डलको मृत्यु भएको अर्को दिन अर्थात् भदौ २२ गते उपमेयर रेणुदेवी झाको नेतृत्वमा आएका मृतकका छोरा राजकुमार मण्डल सहितका बघचौडावासीले मेयर रामज्ञान मण्डल, वडानम्बर ३ का वडाध्यक्ष उदयकुमार सिंह, कार्यपालिका सदस्य श्याम राउत तथा मेयरका सहयोगी लालबाबू राउतविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
तर, मेयर र उनका समर्थकविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको चार दिन नबित्दै भदौ २६ गते मेयर समर्थकले उपमेयर रेणुकुमारी झा हंसपुरनगरपालिका २ का वडाध्यक्ष उदय साह तथा हंसपुर ४ का वडाध्यक्ष किसोरी यादवलाई विपक्षी बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पुनः ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दामा उजुरी दिएका थिए । उजुरी परेयता उनीहरू सम्पर्कविहीन छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:५१
आफ्नै छोरा लिन डीएनए परीक्षण !
भाद्र ३१, २०७६ शिव पुरी
रौतहट — गरुडास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा खेलिरहेका ६ वर्षीय अविनाश बैठा निकै चञ्चल छन् । कसैले नाम सोध्यो भने फटाफट भन्दछन् । तर आमा बुवाको नाम सोध्यो भने उनी अकमकाउँछन् ।
अनि एउटा नाम भन्छन् । उनी हराएर फेला पारिएका हुन् । उनले भनेका नाम यहाँ आफ्नो छोरा हो भनी दाबी गर्न आउने कसैसँग पनि मिल्दैन ।
चन्द्रपुर नगरपालिका १० पडरियाटोलका चन्देश्वर बैठाले अविनाशलाई आफ्नो छोरा दाबी गरेका छन् । अविनाशले आमालाई नचिनेपछि बैठा परिवारलाई छोरा पाउन कठिन भएको छ । उनीहरू पीडामा छन् । छोरा लिन अब डीएनए परीक्षण गराउनु पर्ने भएको छ । उनलाई अरूले पनि आफ्नो छोरा भनेर दाबी गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छोराले बुवालाई चिने पनि आमालाई होइन भनेपछि प्रशासन अन्योलमा परेको छ । घरबाट हराएर फेला पारिएका अविनाशलाई महोत्तरी औरैही ६ का रामलोचन सोनारले आफ्नो छोरा भनेर दाबी गर्न आएका थिए । प्रहरीले प्रमाण ल्याउन भनेपछि सोनार सम्पर्कमा छैनन् ।
दुवै थरिको दाबी र बालकले आमा नचिनेपछि स्थानीय प्रशासन कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने अन्योलमा पर्‍यो । अब डीएनए परीक्षण नगराई बालक जिम्मा लगाउँदा समस्यामा पर्ने प्रशासनको ठम्याई छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले अविनाशले अगाडिरहेको आमालाई होइन भनेको र अर्कोले पनि मेरो छोरा भनेर दाबी गर्न आएकाले डीएनए परीक्षणमा बैठाको छोरा भन्ने प्रमाणित भएमा उसैलाई जिम्मा दिने बताए ।
२०७५ जेठ ३० गते बिहान ८ बजे घर नजिकको पशल छेउबाट अविनाश हराएका थिए । साँझसम्म घर नआएपछि अभिभावकले जोजतलास सुरु गरेका थिए । त्यस पछि ३१ गते इलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुर खोजतलासको निवेदन दिएका थिए । प्रहरीले व्यापक खोजे पनि फेला पारेको थिएन । यस बीचमा अविनाशका अभिभावकले आफन्त र साथीभाइकोमा खोजतलास गरेको सुनाए । कतै फेला पार्न सकेका थिएन् ।
अपहरणको शंका गरिए पनि फिरौतीको रकम र कतैबाट फोन नआएपछि हराएकै भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनी स्थानीय एभरग्रिन बोडिङ स्कुलको नर्सरी कक्षामा भर्ना भएका थिए । कटहरिया ८ बगहीका राजकिशोर महतोले बालक फेला पारेको भन्दै महिला सेल गरुडामा बुझाएका थिए ।
महातोले मनस्थिति बिग्रिएको एक महिलाले छाडेर गएको प्रहरी समक्ष बताएका छन् । उनले केही समय घरमा राखेर २०७५ माघ २२ गते प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए । घटनाको ९ महिनापछि बालक फेला पारेको भनेर प्रहरीले चारैतिर सूचना जारी गर्‍यो । तर, कोही दाबी गर्न नआएपछि महतोले नै अविनाशलाई घर लगेका थिए ।
बैठाका २ छोरी र २ छोरा छन् । अविनाश कान्छो छोरा हुन् । उनले छोरा पाउन जन्मदर्ता, वडा कार्यालयले गरेको नाता सिफारिस, विद्यालयलको सिफारिस तथा आफ्नो सन्तानसँग भएको फोटो समेत पेस गरेका छन् । बुवा चन्देश्वरले आफ्नै छोरा लिन डिएनए परीक्षण गराउनु पर्दा दुःख लागेको सुनाए । ‘यत्रो प्रमाण पेश गरेको छु,’ उनले भने, ‘अब प्रशासनले जिम्मा नदिएर किन दुःख दिन खोजेको ? ’
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:५०